Fikojakojana ny kitapo picnic
1. Aza atao tara-masoandro fa aleo maina voajanahary.2. Halaviro ny fitaovana vy akaiky ny rindrin'ny kitapo araka izay azo atao.3. Fadio ny taratry ny masoandro, ny afo, ny fiatraika amin'ny zava-maranitra ary ny fifandraisana amin'ny solvents simika.4. Fandrahoan-tsakafo: Rehefa avy nosasana sy nanamaina ny koveta efa nampiasaina dia apetraho ...
FANKALAZANA NY FAHA-12 TAONA NY FLYONE
Ny tolakandron'ny 21 Jona, fotoanan'i Beijing, FLYONE kitapo dia nanao fankalazana ny faha-12 taona.Nifamory hifampiresaka ny rehetra ary nandany tolakandro nahafinaritra!Fankalazana ny faha-12 taona
Torohevitra hividianana kitapo picnic
1. Ny rafitra anatiny dia tokony hovidina araka ny zavatra apetraka any ivelany isan'andro.Raha zavatra mahazatra toy ny crisper izy io, dia azo ampiasaina ny kitapo picnic mafy mba hiantohana ny fahamarinan'ny trano anatiny.Raha kitapo sakafo nofonosina entana, dia afaka misafidy kitapo malefaka, izay afaka mampiasa ny th...
Ahoana ny fomba hanaovana kitapo fiantsenana mahavelona?
Ireo kitapo antsoina hoe tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia manondro ireo kitapo azo atao amin'ny fitaovana mety ho simba voajanahary, ary tsy ho ela loatra ny fotoana simba.Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina imbetsaka ihany koa izy ireo.Tsotra ny famokarana, nalahatra tsara ireto manaraka ireto o...
Ahoana ny fomba hifidianana kitapo tendrombohitra?
Fanatanjahan-tena tsara ny fiakarana an-tendrombohitra, tsy vitan'ny hoe manatanjaka ny vatana, fa manatsara ny fiasan'ny cardiorespiratory.Alohan'ny hiakarany dia fidio ny fitaovana mety indrindra, toy ny kiraro fitsangatsanganana, kitapom-baravarankely, sns. Ny kitapo tsara amin'ny fianihana tendrombohitra dia mety ho mora sy mahafinaritra ny fizotran'ny tendrombohitra....
Fomba maro hanafoanana ny fofona ao anaty entana
1. Ny fomba mety indrindra amin'ny ventilate dia sokafy ny kitapo entana ary apetraho amin'ny toerana misy rivotra.Azonao atao ihany koa ny mametraka azy amin'ny masoandro mba ho maina, fa aza apetraka amin'ny masoandro.2. Ny fametrahana zavatra toy ny kitapo saribao volotsangana sy ravin-dite ao anaty kitapo, na mividy kitapo manala formaldehyde, dia afaka manala ny ...
Fototra hividianana kitapo picnic?
1. Ny kitapo picnic dia ampiasaina amin'ny sakafo an-kalamanjana, izay afaka miantoka ny fahaveloman'ny sakafo ary mora entina.2. Fikirakirana kitapo picnic: koveta ho an'ny olona 2 ary koveta ho an'ny olona 4, izay azo vidiana araka ny fangatahana.3. sokajy kitapo picnic.a) Kitapo fisakafoana: Sakaiza ara-tontolo iainana...
Ahoana ny fisafidianana kitapo ho an'ny ankizy?
Ny fividianana ny kitapo ho an'ny ankizy dia tokony hiorina amin'ny toe-javatra misy ny vatan'ny zaza.Tsara kokoa ny mifidy kitapo fianarana maivana ary afaka mampihena ny enta-mavesatra.1. Na decompress.Amin'izao fotoana izao, maro ireo mpanamboatra kitapom-pianarana no nanomboka nibanjina bebe kokoa ny mitondra...
Tsarà Andro iraisam-pirenena ho an'ny asa !
Inona no tokony hotandremantsika rehefa mividy valizy?
Amin’ny maha fitaovana mahazatra ny olona mivoaka birao na mitsidika havana amin’ny andro fialan-tsasatra, dia nojeren’ny mpanjifa akaiky ny kalitaon’ny entana.Mampalahelo raha tsy nahafinaritra ny dia izay tokony ho nahafinaritra noho ny faharatsian'ny entana teny an-dalana.Noho izany...
Inona ny kitapom-batsy mety ho an'ny fiakarana an-tendrombohitra any ivelany?
Rehefa mandeha any ivelany, karazana kitapo inona no mety indrindra hofidina?Amin'ny ankapobeny dia azo zaraina ho sokajy telo ny kitapo, ary ny kitapo ambany 30L dia antsoina hoe kitapo kely.Ny kitapo misy 30-45L dia azo antsoina hoe kitapo antonony, ary ny kitapo mihoatra ny 45L dia kitapo lehibe.Inona no maha zava-dehibe ny...
Ahoana ny fisafidianana kitapo mamy rehefa mivoaka?
Ny reny be pitsiny ihany koa dia hampitaovana kitapo mamy lehibe, antonony ary kely araka ny toe-javatra samihafa amin'ny fivoahana: (1) Mivoaka vetivety Ohatra, raha mivoaka hividy zavatra ianao dia tsy mila. hitondra entana be loatra, kitapo mamy kely fotsiny no...